Uxoshiwe uMjosty kuSigiya Ngengoma
USOMAHLAYA ongumlingisi uPastor Mjosty ucacisa ngokumiswa kwakhe kuSigiya Ngengoma Isithombe: THOKOZANI MBUNDA
USOMAHLAYA waseThekwini, uPastor Mjosty, ubhoboka ngokukhonjwa indlela ohlelweni lomculo kamaskandi oKhozini, uSigiya Ngengoma.
Kulolu hlelo olushayelwa nguKhathide ‘Tshathugodo’ Ngobe noZimiphi ‘Zimdollar’ Biyela, uMjosty ubehlekisa ngezigameko ezenzeke emculweni kamaskandi futhi aze asho izimemezelo zemicimbi ezokwenzeka.
“Kwathi ngolunye uLwesibili ngashayelwa ucingo nguphrojusa walolu hlelo u-Ayanda Melansi, wangibizela emhlanganweni ophuthumayo.
“Wafike wangitshela ukuthi usethathe isinqumo sokuyimisa le ngosi ebengiyenza. Ngathi uma ngimbuza ukuthi yini inkinga, wathi ngolunye usuku ngasuke ngathi Yini Sesigoduka.”
Leli temu elithi Yini Sesigoduka, liyisiqubulo somcimbi kaMjosty oseKing Zwelithini Stadium, eMlaza ngoDisemba 7.
Okhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo, uthe uMjosty wayengaqashiwe yile nhlangano yezokusakaza kuleli kodwa ubevolontiya ukwenza amahlaya ngezindaba ezikamaskandi kuSigiya Ngengoma.
“Emuva kokucubungula kahle, uMjosty waziswa ukuthi le ngosi yayingasakwenzi okwakuhloswe ukuba ikwenze. Wabe esecelwa ukuba ahlabe ikhefu ngesikhathi ithimba (likaSigiya Ngengoma) lusabuyekeza lolu hlelo. Uzokwaziswa ngesinqumo esithathiwe,” kuphetha uMmoni.
Uthe nguye owayecele ukuvolontiya ekwenzeni le ngosi kuSigiya Ngengoma ngenxa yokuthi uyazifela ngomculo kamaskandi futhi wayengenasivumelwano esibhalwe phansi. Uvumile ukuthi iGoduka Music Festival wumcimbi wakhe awenze ngamandla akhe futhi kuboshelwe abaculi abaningi abayizintandokazi okungoKhuzani, Igcokama Elisha, Babo Ngcobo, Dumi Mkokstad, Babes Wodumo, Mampintsha.
* Khonamanjalo, Isolezwe NgoMgqibelo lithole ukuthi uZimdollar noTshatha bamsulwa ekudlalweni kwengoma eyavalwa kuSigiya Ngengoma kaSwenkangemali esihloko sithi, Suka Phezu Kwami ngenxa yokuthi le ngoma ayidlalwangwa yibo kodwa yayisohlwini lwezingoma ezadlalwa nguDJ Zaizo.
Kuvela ukuthi umuntu osobishini kulolu daba osebenza njenge-technical producer yalolu hlelo ngoba nguye okwakufanele alalele izingoma zalo DJ ngaphambi kokuwafaka emoyeni. Mayelana nalolu daba, uMmoni uthe basaphenya kabanzi ngalobu budedengu obenzeka kodwa ngeke aludingide nabezindaba ngoba olwangaphakathi.